काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कृषि जन्य वस्तुहरुको आयात निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्न भन्सारलाई अनलाइन प्रणालीमा विकास गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । कृषि तथा खाद्य पदार्थ आयात गर्दा आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स र अन्य प्रकृया सम्बन्धमा भन्सार...
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले संकलन गर्दै आइरहेको सरकारी कर तथा राजस्व पी.एस.पी.मार्फत संकलन गर्नको लागि हालै एन.सि.एच.एल, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । सरकारको डिजिटल नेपाल कार्यक्रम अनुरूप सरकारी राजस्व पी.एस.पी. मार्फत संकलन गर्नको...
एलजीको वाशिंग मसिन नेपाली बजारमा
एल.जीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स डाइरेक्ट ड्राइभ मोटर (एआई डीडी) भएको वाशिङ मसिन नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । अत्याधुनिक प्रविधियुक्त यस मसिनले कपडाको तौलको साथसाथै कोमलता, नाजुकता जस्ता विशेषताहरु पत्ता लगाउने र कपडाको धुने प्रदर्शन बढाउनुका साथै कपडाको गुणस्तर १८% ले...
फेब्रुअरीमा एस्ट्राजेनेकाको ३० लाख डोज खोप आइपुग्ने जर्मनीको विश्वास
११ माघ, काठमाडौं । बेलायती औषधि कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले फेब्रुअरीमा ३० लाख डोज कोरोना खोप आफ्नो मुलुकलाई उपलब्ध गराउने विश्वास जर्मनीले लिएको छ । पछिल्लो समय कम्पनीले खोप उत्पादनमा केही समस्या भोगिरहेको भए पनि समयमा नै खोप आउने जर्मनीका स्वास्थ्य मन्त्री...
कसरी हटाउने किनमेलको लत ?
हना लुईस पोस्टन पछिल्लो केही बर्षदेखि आफ्नो एक बानी छुटाउन चाहन्थिन् । उनी सौन्दर्य सामग्री, कपडा र घरको सामाग्री खरिद गर्न चाहन्थे, भलै उनीसँग यसका लागि पैसा थिएन । उनी भन्छिन्, ‘मलाई पूर्ण रुपमा किनमेलको लत लागेको थिएन । तीन...
'स्पाइडर–म्यान'को भुमिका पाउँदिन भन्ने डर थियोः टम होल्याण्ड
हलिउड अभिनेता टम होल्याण्ड कमिक पात्र स्पाइडर–म्यानको रूपमा चर्चित छन्। मार्भल सिनेम्याटिक युनिभर्स अन्तर्गतको सपुरहिरो फिल्म स्पाइडर–म्यानमा उनको मुख्य अभिनय छ। अहिलेसम्म उनले ‘स्पाइडर–म्यानः होमकमिङ’ र ‘स्पाइडर–म्यानः फार फर्म होम’ गरेर आफ्नै दुई एकल फिल्म खेलिसकेका छन्। त्यसबाहेक उनले ‘क्याप्टेन अमेरिकाः सिभिल वार’...
पुष्प र गीताको ‘दिइसकेँ यो जोवन’
गायक एब बी सुनार र गायिका मन्जु उपासनाको स्वरमा समावेश ‘दिइसकेँ यो जोवन’को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतमा शान्त गोविन्द महर्जनको शब्द र एच बी सुनारको संगीत छ । डान्सिङ शैलीमा यो गीतको भिडियो तयार पारिएको छ ।...
डाक्टर भगवान कोइरालाको पत्थरीको शल्यक्रिया, भन्छन्- जिन्दगी अनिश्चित छ, राम्रो काम गर्नू
मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष तथा बरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर भगवान कोइरालाको पत्थरीको शल्यक्रिया गरिएको छ। गत बुधबार बिहान स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई काठमाडौंको एक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। आइतबार उनले आफ्नो मिर्गौलामा पत्थरी देखिएको फेसबुकमार्फत् जानकारी दिएका छन्। 'मेरो व्यावसायीक जीवनमा...
काठमाडौं : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले वैवाहिक जीवन सुरु गरेका छन्। ४९ वर्षमा हिँडिरहेका राईले सन् २०१८ की २० वर्षीया ‘मिस मंगोल नेपाल’ ज्याङ्मु शेर्पासँग काठमाडौंको गैराधारास्थित एलिस रिसेप्सन पार्टी प्यालेसमा बिहे गरेका हुन्। करिब २८ वर्ष उमेरको...
फिल्मका लागि रेखाले घटाइन तौल
केही साता अघि अभिनेत्री रेखा थापाले वैशाखबाट फ्लोरमा जाने बताएकी थिइन् । वैशाखबाट छायांकनको तयारी रहेको उक्त फिल्म रेखा आफैंले निर्देशन गर्ने भएकी छन् । निर्माता निर्देशक आफैं रहेको उक्त फिल्मको लिड रोलमा रेखा स्वयम् देखिने छन् । दुई वर्षदेखि...
रूपन्देही प्रहरीले सामूहिक बलात्कारको आरोपमा एकजना प्रहरीसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । बलात्कार भएको झण्डै तीन महिनापछि प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको हो । जिल्लाको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा दरबन्दी रहेका प्रहरी जवान विशाल शर्मा र कपिलवस्तुका गुरुशरण चौधरी पक्राउ परेका...
इलाम : नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व सदस्य जुमानु राई, भोला सिलवाल र सुमन सुवेदी नगदसहित सम्मानित भएका छन्। हरिवन युवा क्लब सर्लाहीले शनिबार नेपाल पुलिसमा आबद्ध तीनैजनालाई नगद १० हजार र कदरपत्रले सम्मान गरेको हो। जुमानु हरिवन क्लबकै उत्पादन...
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले १ महिनामा १०० भन्दा बढी फर्मलाई कारवाही गरेको छ । विभागले अनुचित व्यापारिक कारोबार गरेको जनाउँदै गत पुसमा १०९ फर्मलाई कारवाहीस्वरूप जरिवाना गरेको हो । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको बजार अनुगमनका...
कैलाली । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज भीम रावलले कीर्ते कागजका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको आरोप लगाएका छन् । कैलालीमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रावलले प्रधानमन्त्रीको कीर्ते सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन...
'किताब जात्रा'को आयोजनामा माघ १७ देखि २३ सम्म साहित्य महोत्सव आयोजना हुने भएको छ। काठमाडौंमा आइतबार किताब जात्राले कार्यक्रम आयोजना गरी महोत्सवबारे जानकारी गराएको हो। कार्यक्रममा किताब जात्राका संस्थापक ऋषिराम अधिकारी, बैंकर अनिल केशरी शाह, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट भरत रिजाल, पत्रकार...
एलजीको नयाँ वासिङ मेसिन नेपाली बजारमा भित्रिएको छ। यसमा नयाँ प्रविधि जडान गरिएको कम्पनीको भनाइ छ। जसले कपडाको विशेषता पत्ता लगाएर १८ प्रतिशतले कपडाको गुणस्तर जोगाउँछ। यससँगै स्टिमप्लस टिएम प्रविधि जडान गरिएको छ। यसले र ९९.९ प्रतिशत किटाणु नष्ट गर्छ...
चौबिसौँ घण्टा कल कल पानी बग्ने ढुंगे धारा। ढुंगे धारामा टोलबासीहरुको पानी पँधेरोको भीडभाड। त्यो धारोसँग मेरो अनौठो मोह अनि त्रास। मोह किनभने त्यो पानीको कलकल आवाज र त्यसको धाराप्रवाह। त्रास किनभने जब जब ममीले मलाई च्याप समातेर नुहाइदिनु हुन्थ्यो,...
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड (एनआईबीएल) र सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले एकिकृत अपरेशन सुरु गरेको छ। संयुक्त आपरेशनहरू तीन शाखाहरु घन्टाघर, बिर्तामोड र गाईघाटबाट सञ्चालन गरिने एनआईबीएलले जनाएको छ । यी थप तीन शाखाहरूले बैंकिङ्ग सेवाहरू प्रदान गर्ने...
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का लागि गणक तथा सुपरिपेक्षक पदमा दरखास्त आव्हान भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को लागि करारमा गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा अनलाइनमार्फत दरखास्त आव्हान गरेको हो। विभागले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी करारमा गणक तथा...
युटुबको नम्बर १ ट्रेन्डिङमा ‘छ माया छपक्कै’, दर्शकको उत्कृष्ट प्रतिक्रिया
गतबर्षको दशैंमा रिलिज भएको चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’लाई युटुबमा उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिलेको छ । हलमा बम्पर व्यापार गर्न सफल यो चलचित्रलाई ४ दिन अगाडि युटुबमा सार्वजनिक गरिएको हो । युटुबमा यो चलचित्रलाई करिब २३ लाखले हेरिसकेका छन् । नेपालको युटुब...
११ माघ, महेन्द्रनगर । घरबाट भागेर निस्केका बैतडीको पाटन नगरपालिका-८ का देवर-भाउजूको कञ्चनपुरमा मृत्यु भएको छ । उनीहरुको महेन्द्रनगरस्थित महाकाली अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । दुई दिनअघि घरबाट निस्केका २५ वर्षीय शेरीराम कोली २० वर्षीया भाउजूसहित शनिबार बिहान...
मिस एण्ड मिसेस धादिङ बनाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा दुईजना पक्राउ
११ माघ, काठमाडौं । मिस एण्ड मिसेस धादिङ बनाइदिने प्रलोभन देखाउँदै ठगी गरेको आरोपमा दुईजना पक्राउ परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोलाका प्रहरी निरीक्षक रुपा थापाका अनुसार पक्राउ पर्नेमा इलामका कमल खतिवडा र ललितपुरका हिमाली सुब्बा रहेका छन् ।...
राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीका लागि कृषिका तीन निकायसँग समझदारी
११ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यन्वयन गर्न भन्सार विभाग र कृषि मन्त्रालय मातहतको दुई विभाग तथा एक कार्यालयबीच समझदारी भएको छ । आइतबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा भन्सार विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण...
११ माघ, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप १४ गते बुधबारदेखि लगाइने भएको छ । पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनहरुलाई खोप दिइनेछ । आइतबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग भएको छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले १४ गते १० बजे खोप अभियान सुरु...